Pegasus wuxuu bilaabayaa jidad cusub oo kala ah Georgia, Ukraine, Turkey
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Pegasus wuxuu bilaabayaa jidad cusub oo kala ah Georgia, Ukraine, Turkey
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Georgia War Cusub • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Ukraine War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Shirkadda diyaaradaha ee Pegasus ayaa duulimaadyo cusub ka bilaabaysa magaalada London ee dalka Ingiriiska
Pegasus wuxuu bilaabaa dariiqyo cusub oo Batumi loogu maro Georgia, Odesa oo ku taal Ukraine
Pegasus waxay bilaabeysaa duulimaadyo cusub oo gudaha ah inta udhaxeysa Istanbul Sabiha Gökçen iyo Iğdır
Pegasus waxay siineysaa dabacsanaan buuxda duulimaadyada jaale 31 Julaay 2021
Shirkada duulimaadka ee Pegasus ee raqiiska ah ee Turkiga, ayaa bilaabaysa waddo cusub oo caalami ah oo ka timaada London una socota Batumi oo ku taal Georgia iyadoo sii marinaysa Istanbul
Toddobaadkiiba laba jeer duulimaadyo u dhexeeya London Stansted iyo Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Batumi oo sii maraya Istanbul Sabiha Gökçen ayaa bilaabmi doona 7-da Maajo 2021.
Pegasus sidoo kale dhowaan waxay bilaabeen waddo cusub oo ka timaadda London Stansted ilaa Odesa, iyada oo loo marayo Istanbul Sabiha Gökçen markay ahayd 28 Maarso 2021.
Diyaaradda ayaa sidoo kale bilaabi doonta waddo cusub oo gudaha ah, iyadoo duulimaadyada ka imanaya Istanbul Sabiha Gökçen ilaa Iğdır ay saddex jeer toddobaadkii duulimaadyo bilaabi doonaan 7-da Maajo 2021, iyadoo laga heli karo xiriirro ka socda London Stansted.
Duulimaadyada loo qorsheeyay Pegasus ee Batumi waxay ka ambabixi doonaan garoonka diyaaradaha ee London Stansted Airport waxayna aadi doonaan garoonka caalamiga ah ee Batumi iyagoo sii mari doona Istanbul Sabiha Gökçen maalmaha Jimcaha iyo Isniinta ee saacada 00:05; halka duulimaadyada ka tagaya garoonka diyaaradaha Batumi ee tagaya London Stansted oo sii maraya Istanbul Sabiha Gökçen ay aadi doonaan jimcaha 19:40 iyo Isniinta 14:05.
Odesa ayaa ah goobta shanaad ee Pegasus ee Ukraine, iyadoo ku dareysa duulimaadyadeedii hore ee Kharkiv, Kyiv, Lviv iyo Zaporizhzhia. Duulimaadyada qorshaysan ee ka imanaya London Stansted ilaa Odesa International Airport oo sii maraya Istanbul Sabiha Gökçen waxay bixi doonaan Khamiista iyo Axadda saacadda 00:00, halka duulimaadyada ka baxa Madaarka Caalamiga ee Odesa ay bixi doonaan isla maalmahaas 18:45 (waqtiyada maxalliga ah).
Duulimaadyada la qorsheeyay ee Pegasus ee Iğdır waxay ka ambabixi doontaa garoonka diyaaradaha ee Istanbul Sabiha Gökçen Airport ilaa Iğdır Şehit Bülent Aydın Airport maalmaha Talaadada, Jimcaha iyo Axada saacadu markay tahay 14:40, halka duulimaadyada Iğdır Şehit Bülent Aydın Airport ilaa Istanbul Sabiha Gök operateen Airport ay isla maalintaas shaqeyn doonaan. 17:20 (waqtiyada maxalliga ah ayaa khuseeya).